Usapho olunobuhlobo eAnglesea Beach House
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNatasha
Ikhaya elicocekileyo elicocekileyo lilungele iintsapho okanye abahlobo abafuna iholide yokuphumla kwi-Anglesea entle. Ibekwe kwisitrato esizolileyo, kodwa umgama wokuhamba ukuya kwiikhefi, iindawo zokutyela, ulwandle, umlambo, iipaki kunye neKhosi yeGalufa ye-Anglesea edumileyo (igcwele iikhangaroos!)
Ngokusetwa kwegadi enoxolo, iiyadi ezivaleleke ngokupheleleyo, umgangatho wokonwabisa omangalisayo, umlilo weenkuni kunye neendawo zokuhlala ezivulekileyo kunye neendawo zokulala, yeyona ndawo ifanelekileyo 'ikhaya-kude nekhaya'.
Ngamagumbi okulala amane (ama-8 okulala), ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, isicwangciso esivulekileyo esivulekileyo sokuhlala kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela elikhulu, indawo yokuhlamba impahla, kunye nendlu yangasese eyahlukileyo, iAnglesea Haven lelona khaya lifanelekileyo elingaselunxwemeni kwiholide yosapho okanye ukudibana kunye nencinci. iqela labahlobo.
Sinabantwana abancinci abethu kwaye siyazi ukuba kunokuba nzima ukupakisha yonke into abayifunayo. Ke ngoko uya kufumana uluhlu lwezinto zabantwana, kubandakanya:
- Iincwadi, iithoyi kunye nemidlalo yebhodi
- Iipleyiti zeplastiki, iikomityi, izitya kunye nezinto zokucheba
- Isitulo se-Bumbo kunye ne-rocker yomntwana
- Portacot x 2
- Isitulo esiphezulu
-I-Avent sterilizer yebhotile
- Iiyadi ezivaliweyo ngokupheleleyo
-Iithoyi zaselwandle (ngaphandle kufutshane nendawo yeBBQ)
Vula umnyango wangaphambili kwaye ungene kwipaseji yethu enkulu ekukhokelela kwindawo yokuhlala ephambili enegumbi lokuphumla elivulekileyo, ikhitshi kunye nendawo yokutyela.
-Iziko (iinkuni zinikezelwe)
- abalandeli Ceiling
- Itafile yokutyela yabantu abasi-8
-Ibhedi ekhululekileyo kunye nezihlalo zeenyawo
-ITV enkulu enescreen esicaba kunye nesidlali seDVD
- Iikhabhathi zokugcina
- Umatshini wekofu we-ALDI (iipods ezihambelana ne-BYO!)
-I-oveni, umpheki woveliso lwento kunye nemicrowave
-Zixhotyiswe ngokupheleleyo ngeembiza, iipani, izitya eziphakayo, iipleyiti, iitoti zekeyiki, izitya nokunye!
-Izixhobo ezincinci zombane ezibandakanya iketile, i-toaster yesilayi esi-4, i-rice cooker, i-fry pan, i-cooker ecothayo, imixube yezandla kunye neblender.
- Iziqholo ezisisiseko kuquka ioli, ityuwa, ipepile, ikofu, iti, iswekile kunye nemifuno
- Itawuli yamaphepha, iingxowa zenkunkuma, ulwelo lokuhlamba izitya, iithebhu zokuhlamba izitya kunye namalaphu
- Iifolokhwe, amacephe, iimela, iipleyiti neekomityi ezaneleyo kumntu wonke
-Ijonge igadi yangaphambili
- Iibhedi ezimbini zomntu omnye
- Ifeni yasesilingini
- Isifudumezi sephaneli yodonga
-ITV enesidlali seDVD (akukho ziteshi zikamabonakude)
- Imidlalo, iipuzzle kunye neencwadi zabantwana
- Iikhabhathi zomgangatho ophantsi kunye needrowa
- Ibhedi enkulu kaKumkanikazi
- Iikhabhathi (ezinendawo yokuxhoma) kunye needrowa
- Iishelufa ezineencwadi kunye nendawo yokugcina izinto
- Ibekwe ecaleni kwegumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese
-ITV eneDVD player
-Ijonge indawo yomgangatho osecaleni
-Ibhedi enebhedi ephindwe kabini ezantsi kunye nebhedi eyodwa ngaphezulu
- fan ephathekayo
- Ishawa evaliweyo ngeglasi
- Ibhafu enethoyi
- Isitya sesandla
- Iintsimbi zetawuli ezininzi
I-TOILET (yahlukene negumbi lokuhlambela)
- Imeshini yovasa Impahla
- I-ayina kunye noku-ayina, ii-airers zempahla, i-vacuum, i-mop, umtshayelo, njl
- Iindwendwe kufuneka zize namaphepha azo, iipillowcases kunye neetawuli. Sibonelela ngamaqweqwe acocekileyo eqokobhe, izikhuseli zoomatrasi, izikhuseli zemiqamelo, iimethi zokuhlambela kunye neetawuli zeti.
- Ngokungqongqo akukho zilwanyana zasekhaya kwaye akukho kutshaya ngaphakathi kwipropati
- Akukho matheko okanye izikolo ezivunyelweyo
4.83 out of 5 stars from 31 reviews
4.83 · Izimvo eziyi-31
Ibekwe ngokugqibeleleyo phakathi kwetyholo kunye nonxweme, iAnglesea yindawo entle yehlabathi enento yakhe wonke umntu. Yonwabela umdlalo wegalufa kwibala legalufa elikufutshane (ligcwale ngeekhangaru!), Hamba ugudle umlambo ukuya elunxwemeni, uhambe uye ezivenkileni nakwiivenkile zokutyela, uchithe ixesha lokuloba nabantwana okanye ujonge iindawo zokudlala ezintle, uqeshe isikhephe sokubhexa. imini, okanye uhambe ngokulula kwizitrato ezinemithi kwaye wonwabele imbonakalo entle, izilwanyana zemveli kunye nomoya omtsha. Sikwathanda ukutyelela umzi-mveliso wetshokholethi oMkhulu we-Ocean Road umgama omfutshane wemizuzu emi-5 ukusuka ekhayeni lethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Natasha
Sifumaneka kumgama omfutshane wokuhamba kwaye sinokuqhagamshelwa ngefowuni okanye nge-imeyile iiyure ezingama-24 ngosuku ukuba ufuna uncedo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Sikwanalo neqela labantu kulo mmandla esinokulibiza ukuba lilungise nayiphi na imiba yogcino xa lunokuthi luvele.
Sifumaneka kumgama omfutshane wokuhamba kwaye sinokuqhagamshelwa ngefowuni okanye nge-imeyile iiyure ezingama-24 ngosuku ukuba ufuna uncedo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Sik…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5643
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Anglesea